Brezila: Nahazo alalana ilay tetikasa nokileary efa nampiady hevitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2008 22:34 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Español, বাংলা, English
Nahazoana fahazoan-dalana vonjimaika [pt], avy amin'ny Ivotoerana Breziliana miahy ny tontolo iainana sy ny akora azo avaozina tamin'ny 23 jolay farany teo, ho azo trandrahina ilay mpamokatra angovon'aratra nokileary Angra 3 efa nampiady hevitra, nefa mialoha izany dia andiam-pifanarahana fiarovana ny tontolo iainana mahatratra 60 no napetraky ny minisitry ny tontolo iainana Carlos Minc tsy maintsy ekena. Izy 60 dia fikaroham-bahaolana maharitra manomboka any amin'ny saram-pandaniana fifehezana ny taratra (nokileary) ka hatrany amin'ny fikarakarana ny fampianarana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsy maintsy soniavina ao amin'ny fanomezana lalana vonjimaika ho famenoana ny Angra 3 ireo fepetra ireo mialoha ny fandravonana ny asa ny volana sepitamb°ra amin'ity taona ity.
Nahazendana ny mpamaham-bolongana sasany ity fanapahan-kevitra ity satria ity Minisitry ny tontrolo iainana Carlos Minc ity raha heverina dia nanangana ny antoko mpandala ny voary (Antokon'ny maitso raha heverina amin'ny dika manta) ary nalaza ho niady mafy hanoherana ny fampiasana ny angovo nokileary dia lasa minisitry ny Tontolo iainana rehefa niala i Marina Silva. NIlaza moa izy fa tsy maintsy mahita ny fametrapetrahana rehetra mialoha ny fiafaran'ny fotoam-piasany. Toa hita ihany manko fa tsy mitovy hevitra loatra i Minc sy ny filoha Lula, izay efa nilaza ny fampanantenany momba ny angovo nokileary, rehefa miresaka ity lohahevitra iray ity fa tsy mba tahaka ny mahazatra taloha intsony ny tsy fifanarahan-kevitra. Namoaka ny sarin'izy mirahalahy tamin'ny 1989, nandritra ny fihetsiketseham-panoherana ny fananganana ity Angra 3 ity indrindra i Jorge Henrique Cordeiro [pt] . Mihevitra ny mpamaham-bolongana fa tokony ho tany amin'ny angovo madio sady mbola betsaka no nandaniam-bola:
Amin'ny lafiny ilany kosa indray, Briguilino [pt] kosa mino fa fanaporofoana “fa hita aloha loatra ny mahatsinontsinona ny mpiaro ny tontolo iainana breziliana” ny fitakiana isan-karazany hahazoana ny fahazoan-dalana, ary eritreretiny fa dingana tsara ilay fanomezan-dalana:
Nitsapa ny hevitry ny mpamaky azy amin'ity raharaha ity i Projeto Jogo Limpo [Tetikasa Lalao Madio, pt] . Namoaka ny lahatsoratra etsy ambany nalefan'ny Greenpeace Brazil tamin'ny alalan'ny imailaka ny mpamaham-bolongana sasany, mampirisika ny olona hitaraina mivantana amin'ny filohan'ny IBAMA:
Antsoina hoe “Tonga ny Messiah hitondra filazandoza (vaovao mampalahelo)” ity hetsika ity ary efa nidina an-dalamben'i Brazilia renivohitra sy Rio de Janeiro. Hoy [pt] Ricardo Baitelo, mpanetsiketsika avy amin'ny Greenpeace Brasil :
Nalaina avy amin'ny hetsi-panoherana ny fananganana ny Angra 3 nokarakarain'ny Greenpeace Brazil tamin'ny 23 jolay ireo sary nalaina [jereo ny lahatsoratra nadika], rehefa nosoniavina ny fifanekem-piaraha-miasa. Sary nalain'ny Agência Brasil ireo ary ambany fifehezan-dalàn'ny Creative Commons licence.